Ithuba Lokugcina Lokubhalisa: Isigamu Sezinsuku Zokusebenzela Kusasa Martech Zone
Ithuba Lokugcina Lokubhalisa: Isigamu Sezinsuku Zokusebenzela Kusasa
NgoMsombuluko, Juni 16, 2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ngibheke phambili ekukhulumeni nabangane abambalwa abahle, kufaka phakathi UKyle Lacy, lapha e-Indianapolis kusasa e-workshop: Online Social Networking for You and Your Business.
Ukusa kuzoqala ngo: Kungani ukuxhumana nomphakathi kuyizindlela ezinamandla zokuxhumana zebhizinisi nokuthi imaphi amanethiwekhi omphakathi alungele ibhizinisi lakho nezinhloso zakho okwethulwe nguSarah “Intellagirl”URobbins.
Ezokuphepha nokuPhepha - Yiliphi izinga lezokuphepha onalo engosini yokuxhumana nabantu?
Ukugcina Umkhiqizo Wakho - Uwugcina kanjani umkhiqizo wakho kwinethiwekhi yokuxhumana nabantu? Uyiphatha kanjani iphoyisa?
Amanethiwekhi Wokuxhumana Kwangaphakathi - Usebenzisa kanjani amanethiwekhi omphakathi ukudala ingxoxo phakathi kwabasebenzi bakho bangaphakathi?
Impact Online - Ungalinganisa kanjani umthelela wokumaketha emphakathini we-inthanethi futhi ungakutshelani?
Izinkundla Zokuxhumana Neminye Imidiya - Uwahlanganisa kanjani ama-social network neminye imithombo yezokuxhumana?
Izandla ku-Session - Dala inethiwekhi yakho yokuxhumana nabantu ngosizo lwabasebenzi beMediaSauce.
Usuku luzovalwa ngengxoxo yephaneli, Ukuvikela Idumela Lakho Ku-inthanethi. Uma ungathanda ukubhalisa, uthola okungcono kakhulu i-butt yakho ngegiya!
I-Traffic Enkulu Yekhwalithi Yentengo Yehembe
Ividiyo: I-Sliderocket Beta Iyeza Maduze!